Muporofita aponda mukadzi | Kwayedza
Muporofita aponda mukadzi
27 Mar, 2020 - 00:03	 2020-03-26T20:41:55+00:00 2020-03-27T00:04:54+00:00 0 Views
Madzibaba Moses Busendi
MUPOROFITA wechipositori ane mukurumbira kuCentenary, anonzi akadzika mukadzi wake demo achibva afira ipapo, iye ndokunwa muchetura achiedza kuzviuraya asi pashure ndokuzonozvipira kumapurisa.
Anga achipomera mukadzi wake kuva nezvikomba.
Mutauriri wemapurisa kudunhu reMashonaland East, Inspector Milton Mundembe, vanoti Madzibaba Moses Busendi (27) wemubhuku rekwaKadzungura, kuSt Alberts, ari kupomerwa kuponda mudzimai wake, Itai Boterere (20) achiita zvekumudzika demo mumusoro.
Madzibaba Moses anonzi akatanga kupopotedzana nemudzimai wake achimupomera kuita chipfambi apo akazobuda mumba achienda kumba kwemunin’ina wake, David Busendi, uyo anogara mumusha mumwe chete uyu.
Insp Mundembe vanoti murume uyu akakumbira demo kumunin’ina wake uyo aitorishandisa kutema huni idzo aipisisa fodya.
Madzibaba Moses anonzi akati aizoridzora nekukasika achiti airida kutemesa huni.
“Moses Busendi anonzi asvika kumba uku nedemo riya, akasvikowana mudzimai wake atorara apo akasvikomutema mumusoro kamwe chete achibva angofa ipapo.
“Anonzi aona kuti auraya munhu, akazokanda demo riye panze, iye ndokunwa mushonga unouraya tumbuyu muzvirimwa achiedza kuzviuraya,” vanodaro Insp Mundembe.
Madzibaba Moses anonzi akazonozvipira kumapurisa epakamba yeSt Alberts uko akasvikotaura nyaya yake achibva asungwa.
Akazoonekwa kuti ainge anwa muchetura zvikaita kuti aendeswe kuchipatara cheSt Alberts uko ari kurapwa akarindirwa nemapurisa achimirira kuendeswa kumatare edzimhosva. Mune imwewo nyaya, Insp Mundembe vanoti murume anonzi Benard Muganhiri (49) wepaPlot 5 kuSandlands, kuCentenary kwekare, akawanikwa akazvisungirira mudhirihora rekupisira fodya.
Vanoti Muganhiri anonzi akabva kumba kwake husiku achisiya mudzimai wake, Dadirai Chikonyora (55), arere achiti ainopisa fodya.
Chikonyora anonzi akazomukira mangwanani achida kunopa murume wake svutugadzike apo akasvikotambirwa nemutumbi wake wakarembera mudhirihora.
Mutumbi uyu wakazoendeswa kuimba yerunyararo kunoongororwa nanachiremba uye waisava nemaronda.